Nitady vola hiterahan-dramatoa: mpivady mpaka an-keriny voasambotry ny polisy | NewsMada
Notazonina enina andro ilay zaza 5 taona vao votsotra teny am-pelatanan’ny mpaka an-keriny. Nitakiana dimy tapitrisa ariary izany. Tratran’ny polisy anefa reto mpivady sy ny mpiray tsikombakomba aminy nanao ity fakana an-keriny ity…
Olona telo, voasambotry ny polisy tamin’ny fakana an-keriny teny Ambohimanarina, ny alakamisy teo. Ny 22 novambra lasa teo no nisehoan’ny fakana an-keriny, zaza lahy 5 taona, nianatra tamina sekoly tsy miankina iray teny Ambohimanarina. Tratra teny Mamory Ivato ny vehivavy roa sy lehilahy iray, sady mpivady ireto farany no bevohoka ramatoa. Voalaza fa efa nifonja ny iray tamin’izy telo ireo.
Araka ny fanazavan’ny polisy, notazonina teny Ivato teny ilay zaza io, nandritra ny enina andro teo . Nangataka vola 5 tapitrisa Ar izy ireo tamin’ny ray aman-drenin’ilay zaza. Niady varotra ka 1 tapitrisa Ar ny fifanarahana ho takalony ary teny Imerinafovoany ny fotoana. Nametraka fitoriana teny amin’ny BC Anosy ny fianakavian’ny zaza ka raikitra ny fanadihadiana.
Votsotra ilay zaza rehefa voaloa ny vola 1 tapitrisa Ar. Nandeha hatramin’ny famotorana ka tratra tamin’ny alalan’ny “puce” nifandraisan’ireo mpaka an-keriny tamin’ny fianakaviana. Narahana izany ka tratra teny Mamory Ivato ireo olona ireo, toerana nitazonana ilay zaza ihany koa.
Sambany naka an-keriny
Niaiky ny helony izy ireo nandritra ny fanadihadiana natao. Nilaza izy ireo fa noho ny tsy fananana no nanaovan’ireo izao asa ratsy izao. Ilay rangilaza fa entiny ampiterahana ny vadiny ny vola. Ilay ramatoa iray kosa niteny fa saika hanaovana harona amidy ny vola. Voalazan’ny polisy fa sambany naka an-keriny ireto olona ireto, izao tratra izao. Natolotra ny fampanoavana, omaly ihany, izy ireo.